सन्दीपलाई प्रश्नः मिठाईलाल किन कालो ? (भिडियो) « Janata Samachar
सन्दीपलाई प्रश्नः मिठाईलाल किन कालो ? (भिडियो)
काठमाडौं । सन्दीप क्षेत्री अहिलेका चर्चित र व्यस्त कमेडियन हुन् । सन्दीपलाई अहिले देश तथा विदेशमा हुने स्टेज कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त छन् । यसको साथमा उनी कान्तिपुर टेलिभिजनम ‘ह्वाट्स द फ्लप’ नामक कमेडि शो चलाउँदै आएका छन् ।
सुरुवाती दिनमा खासै चर्चामा आउन नसकेको यो शोमा जब मिठाईलाल नामक पात्र जोडियो तव शोले बेग्लै किसिमको चर्चा पायो । शोमा मिठाईलालको पात्रलाई एकदमै रुचाईयो । मिठाइलालले बिभिन्न सेलिब्रेटीसँग गरिने कुराकानीलाई दर्शकले रुचाउन थाले ।
जब कुनै पनि शोको चर्चा हुन्छ त्यसको पक्षविपक्षमा तर्कवितर्क हुनु स्वभाविक हो । सन्दीप यानिकी मिठाइलालको हकमा पनि यस्तै भयो । शोमा भएको मिठाईलाल पात्रको बारेमा अनेका टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो । मिठाईलाललाई किन कालो बनाएको ? तराई क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरु सबै कालो छन् ? जस्ता प्रश्नहरुको सामना सन्दीपले पनि गर्नुपर्यो ।
जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘हाइ फाइभ’मा विवेक खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा यी लगायत अन्य जिज्ञासाको बारेमा पनि कुराकानी भएको छ । हेरौँ सन्दीप क्षेत्रीसँग गरिएको रमाईलो कुराकानीः